Qaramada Midoobay oo balan qaad hor leh u sameeysay dowladda Soomaliya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Qaramada Midoobay oo balan qaad hor leh u sameeysay dowladda Soomaliya
Qaramada Midoobay oo balan qaad hor leh u sameeysay dowladda Soomaliya
Siihayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya Amb Axmed Ciise Cawad ayaa la kulmay Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan. Iyadoona kawada hadlay iskaashiga qaramada midoobay iyo Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha xaalada gobolka.
Sidoo kale labadaan masuul ayaa kawada hadle arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga qaramada midoobay, arrimaha qaranka mudnaanta u ah iyo xaaladaha gobolka ka jira.
Amb Axmed Ciise Cawad Sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahaa ayaana warbixin ka siiyay ergayga qaramada midoobay ee Soomaaliya, james swan hormarka ay dowladda Soomaaliya ka gaartay arrimaha aMmaanka xiriirka caalamiga aha ee saaxibada caalamka ,dhaqaalaha iyo dib ukabashada dalka.
Ugu dambeyn Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa balan qaaday in ay kordhin doonaan taageerada ay Soomaliya siiyaan oo ay kamidka yihiin dhinacyada Amniga iyo Arrimaha Bani’aadanimada.